Dhacdo Xiiso Leh: Sac Laba Madax Leh Oo Madaxyadiisa Midba Gaar Loo Iibiyay | Araweelo News Network
Dhacdo Xiiso Leh: Sac Laba Madax Leh Oo Madaxyadiisa Midba Gaar Loo Iibiyay
Queensland(ANN)Sac laba madax leh oo laga leeyahay magaalada Queensland ee dalka Australia, ayaa xaraashkiisa loo qabtay xaflad laga yaabay, kaasoo lagu kala iibsaday madaxii kaliyaba lacag dhan $268.5, taasoo qiimaha lagu kala iibsaday ka dhigaysa $537.
Sacan oo laba weji leh, isla markaana hal il oo kaliya leh, labadiisa wejina mid kaliya ilko leeyahay, laba san oo caadi u shaqaynayana leh, xaaladiisa caafimaadna tahay mid aad u sarraysa, waxa uu ka mid noqday lo’da ama sacaha ugu qaalisan deegaankaas, kaasoo loo xaraashay si la yaab leh.
Wakiilka mulkiilaha sacan leh oo la yidhaa Mark Peters, ayaa sheegay in labada weji ee uu leeyahay soo jiiteen shirkad iibsanaysay, waxaannu yidhi; “Sacan oo laba weji leh, wuxuu soo jiitay shirkadda Saleyards, waxaanay bixisay lacag caddaaladda ku salaysan.”
Nin ka mid ah dillaaliinta ka qaybgalay goobta lagu xaraashay sacan oo la yidhaah Mr. Shepherd, ayaa sheegay in sac kale oo laf ahaantiisu laba weji lahaa oo 17 sanno jiray, balse aan caafimaad ahaan wanaagsanayn ay diideen, halka sacan oo 440kg ahaa uu noqday mid qaali ah oo halkii kiilooba la siistay 122 cent oo doollarka Maraykanka ah.